Global Voices teny Malagasy » Fitsipi-pitondrantena Ataon’ ny Tena Samirery, Mba Ho Fepetra Arahana Amin’ny Fanaovan-gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2014 4:46 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Morris Nandika Erikah
Nikaroka itofony tany amin'ireo mpanoratra vaovao, ireo mpikaroka, ireo mpamoaka boky ny Online News Association  (ONA) (Fikambanan'ny Filazam-baovao Amin'ny Aterineto) mba hamorona fitsipi-pitondrantena sy fehezan-dalàna tokony arahana ho an'ny famoaham-baovao , izay afaka ampiharina amin'ny toe-javatra maro. Miompana indrindra amin'ireo masoivoho mpampiely vaovao, ireo orinasa vao misondrotra, ireo mpanao gazety mandeha irery ary ireo mpitoraka bilaogy ny tetikasa.
Nilaza izao tamin'ny tafatafa tamin'ny emailaka i Tom Kent , tompon'andraikitry ny tetikasa :
Firaisan-kevitra amin'ny fototra iaingàna aloha no dingana voalohany amin'io zotra io, ireo zavatra tokony tena jerena ho an'ireo mpanao gazety , ao anatin'izany ny “filazana ny marina”, “fifandrohitan-tombotsoa”, “ny vondom-piarahamoniny”, “fihetsika amin'ny asa”. Manome hevitra izy ireo hoe tokony ataon'ireo mpampiely vaovao na mpanao gazety laharam-pahamehana ireo resaka voatanisa ireo.
Ny fiatrehana ny resaka tsy fombàna na amin'iza na amin'iza  ho an'ireo mpampiely vaovao na ireo mpanao gazety no dingana faharoa amin'ilay zotra. Rehefa vita izany, afaka manefy ilay fitsipi-pitondrantena arak'izay hitany fa mahamety azy izy ireo. Ahitàna safidy avy aminà lisitra lavabe misy ireo olana  izany, ny zavatra rehetra miainga amin'ny resa-betaveta sy ny dokambarotra, ka hatramin'ireoloharanom-baovao miafina. Ezahan'izy ireo izay hanatràrany ny sehatra iraisam-pirenena, amin'ny toe-javatra maro karazany mety ilaina, ary mba maka toetra manara fanavaozana hatrany.
Naorina tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny avy any ivelany ny fizotrany, olona miasa an-tsitrapo no mitondra ny fandraisany anjara amin'ny famolavolàna ny fitsipi-pitondrantena, ary manaiky ireo fanehoan-kevitra entin'ireo ankolafy rehetra liana amin'izany maneran-tany. Na izany aza, ilay ekipa fototra dia ahitana ireo mpanao gazety, ireo matihanina amin'ny fampahalalam-baovao, ary ireo mpampianatra asa fanaovana gazety  avy aminà fikambanana Tandrefana karazany maro daholo. Nalefan'i Kent tamin'ny emailaka izao:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/08/31/63225/
 fitsipi-pitondrantena sy fehezan-dalàna tokony arahana ho an'ny famoaham-baovao: http://journalists.org/resources/build-your-own-ethics-code/
 ireo zavatra tokony tena jerena ho an'ireo mpanao gazety: https://docs.google.com/document/d/17qGGpU1fTC0OUjpaspgE1GbQL0Q3aNFLPdNp9VJkDvc/edit
 fiatrehana ny resaka tsy fombàna na amin'iza na amin'iza: https://docs.google.com/document/d/1zVfjhDgJ-ryy-0MdRlb3bOuzYBYBeYjy8F9svNYUqdo/edit?usp=drive_web
 lisitra lavabe misy ireo olana: https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0B83FVD7UtsFUZ1Z0bzJDY0t5R2s
 mpanao gazety, ireo matihanina amin'ny fampahalalam-baovao, ary ireo mpampianatra asa fanaovana gazety: https://docs.google.com/document/d/1rMiSRnO-tA7yNF2VX-4OrKgmKwEb5n_vNWoJVON51-w/edit